Anoshamisa Instagram Kushambadzira Matanho Kuti Utore Vateveri Nokukurumidza | ECommerce nhau
With the chaiyo Instagram yekushambadzira zanoKumirira vashanyi kutenga kunogona kuva chinhu chekare. Zvinonzwika zvakanaka handiti?
Zvakanaka, iwe unogona kuzvitarisa seizvi: fungidzira 4.000 nyowani Instagram vateveri vanokwanisa vari kumiririra kutenga kuchitoro chako, mushure memavhiki mana chete ekutanga bhizinesi rako. Iwe unofunga sei izvo zvinokanganisa kutengesa kwako?
1 Kukwidziridzwa kwakagovaniswa pa Instagram
2 Gadzira uye ubudise mifananidzo chaiyo
3 Ramba uchitaurirana nemakwikwi
Kukwidziridzwa kwakagovaniswa pa Instagram
Iko hakuna kudikanwa kwekunyanya kuomarara. Iwe unoziva here inokurumidza uye yakachipa nzira yekusvika kune vakawanda vateereri? Ndokunge, kukwereta vateereri veumwe munhu.
Panogona kunge paine zvimwe zvigadzirwa kunze uko zvinogovera vateereri vakafanana kune vako, asi ivo havana zvigadzirwa zvinokwikwidza zvakananga. Zvese zvaunoda kuti uite kuzviwana, kutaurirana navo, uye upe hushamwari kutaurwa kuchinjana.
Izvi maBrand achaburitsa mufananidzo uye meseji pamusoro pechiratidzo chako; uye iwe unozotumira chimwe chinhu nezve yavo mhando. Ipapo zvese zviri zviviri zvakabatana kune mamwe ma profiles. Izvi zvakafanana nekusimudzirwa kwemuchinjikwa, uye ndiyo inokurumidza nzira yekuwedzera vateveri vako ipapo ipapo.
Gadzira uye ubudise mifananidzo chaiyo
Dzidza maitiro ekugadzira uye kutsikisa akajeka Instagram mifananidzo. Uhu hunyanzvi hwaunofanirwa kukwanisa kunzwisisa nekukurumidza.
Iwe unogona kutanga nekugadzira akawanda Instagram matemplate ayo anokutendera iwe kuti ugadzire zvirinani mifananidzo kuti iite sekuwedzera kwechako chako, pasina kutanga kubva kutanga zvekare.
Ramba uchitaurirana nemakwikwi
Comment uye "se" vateveri vako 'zvinyorwa sezvo izvi zvinogona kukura yedu pachedu nhamba yevateveri uye vateveri. Muchokwadi, ichi ndicho chimwe cheanokosha ekushambadzira e Instagram ayo anogona kutibatsira kukura sevashambadzi uye kuti makambani mazhinji anoregeredza kushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Anoshamisa Instagram Kushambadzira Matanho Kuti Utore Vateveri nekukurumidza
Indiegogo inopinda Ecommerce nemusika wayo mutsva